Emerald nke ụwa kachasị ukwuu - Nwelite dị ukwuu 2021 - Vidio ọhụrụ
Emerald kasị ukwuu n'ụwa
Nnukwu emerald na ụwa bụ Inkalamu, Lion Emerald mana The Bahia Emerald a na-ewere dị ka emerald kasị ukwuu achọtara.
Ọ dabere ma ànyị na-atụle ngọngọ nke nwere ọtụtụ okwute ma ọ bụ otu kristal.
Emerald kasị ukwuu n'ụwa achọtala
Nnukwu emerald na ụwa bụ Bahia Emerald: 1,700,000 carats
Bahia Emerald nwere otu nnukwu shard achọtarala. Nkume ahụ, nke dị ihe dị ka kilogram 341 ma ọ bụ 1,700,000 carats, sitere na Bahia, Brazil ma bụrụ kristal nke agbakwunyere na nkume nnabata. Ọ gbapụrụ idei mmiri n'oge Hurricane Katrina na 2005 n'oge oge nchekwa na ụlọ nkwakọba ihe na New Orleans.
Enwere esemokwu nke onye nwe ya mgbe ekwuputara na ha zuru ohi na Septemba 2008 site na nchekwa echekwara na South El Monte na Los Angeles County, California. Ihe bara uru di na ya ma ekpebiela ikpe na nwe ya. Okwute ahụ abụrụla ihe dị ka nde $ 400, mana ezi uru edoghị anya.
Emepụtara emerald buru oke ibu 180,000 carats emerald
Ndị na-egwupụta akụ n'ime nnukwu Carnaiba Mine dị na Brazil mere ka ekpughere otu narị puku carat 180,000. Raldkpụrụ emerald a dị ịtụnanya na-anọ 4.3 ụkwụ ogologo ma jiri ya kpọrọ ihe ruru $ 309 nde.
A chọtara nkume ahụ na mpaghara Brazil mara imepụta ihe bara nnukwu uru, Carnaiba Mine dị na steeti Pernambuco. A hụrụ ụyọkọ ihe bara nnukwu uru na 200 mita n'ime omimi m wee chọọ mmadụ 10 kwa izu iji wepụ ma bulie ụyọkọ ahụ n'elu.
Ihe omuma a bu ihe mejuputara 180,000 nke emerald beryl. N'iburu ogo, ụkọ na ọnụ ọgụgụ kristal, ndị ọkachamara na-eme atụmatụ na ụdị ihe niile nwere ike ruru $ 309 nde.
Kasịnụ emerald kristal n'ụwa bụ Inkalamu, ọdụm ọdụm: cara 5,655
Achọpụtala emerald kachasị n'ụwa, ịdị arọ ya bụ 1.1kg ma ọnụ ahịa ya ruru £ 2m, n'otu ebe a na-egwupụta ihe na Zambia. Achọpụtara carats 5,655 site na ụlọ ọrụ ndị na-egwupụta akụ Gemfields na Kagem, emerald kasị ukwuu n'ụwa, na October 2, 2020.
Akpọwo ya Inkalamu, nke pụtara ọdụm n'asụsụ obodo Bemba. Gemfields kwuru na ọ bụ naanị obere na nkume dị oke ọnụ ka a na-enye aha. A họọrọ aha Bemba iji sọpụrụ ọrụ nchekwa ụlọ ọrụ ebe a na-egwupụta akụ̀ ndị dị n’ime ala.
Emerald Unguentarium: carat 2,860
Emerald Unguentarium, ihe ngosi nke emerald 2,860 ct (20.18 oz) nke a wapụtara na 1641, gosipụtara na Treasury Imperial, Vienna, Austria.
Emerald dị nsọ: 2,620 carats
N'ịbụ nke si na 3,600 ct Zambian emerald na 2006, ihe oyiyi Emerald Buddha dị nsọ dị 2,620 ct.
Ihe nnọchianya nke Siddhartha Gautama bụ otu n'ime nnukwu nkume a tụrụ atụ n'ụwa. E gosipụtara ya n'ọnọdụ ọnọdụ mudra nke a na-ejikọkarị na ndụmọdụ nye ndị ezinụlọ ya (sangha ma ọ bụ ndị ụkọchukwu) ịkwụsị esemokwu n'etiti onwe ha.
N'ịdị arọ na carats 2,620, o nwere ọmarịcha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ mara mma (n'ihi adịghị ọcha nke chromium na vanadium), nye m ụcha kachasị mma maka emerald, ọ dịkwa obere nke enweghị ihe ọ bụla.
Ọ dị oke obere ka ụdị ike a nwee nsogbu ọ bụla karịa ịbịnye ya n'ime ihe bara nnukwu uru, yabụ mkpebi ụlọ ọrụ ahụ mere iji wayo ọ bụ obi ike. Ọ bụ ọkaibe na-esere ya na-akpọ ya Aung Nyein, onye si Burma mana bi na Thailand.
The Guinness Emerald Crystal: carat 1,759
Guinness Emerald Crystal chọpụtara na Coscuez emerald mines bụ otu n'ime nnukwu ọla emerald kristal na ụwa, ọ bụkwa kristal emerald kacha ukwuu na nchịkọta kristal nke Banco Nacionale de la Republica na Bogota, isi obodo Colombia.
Amaghi aha Guinness, mana na elongated, 1759-carat, na-enwu enwu na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ nwere ihe niile nzere iji banye n'akwụkwọ Guinness nke ndekọ ụwa dị ka nnukwu ọnụ ahịa kachasị mma n'ụwa ma ọ dịkarịa ala ruo afọ ụfọdụ ruo mgbe ọ bụ kristal ndị ọzọ bu ibu karịa emerald.
Carats 1,686.3 nke LKA na 1,438 carats Stephenson emeralds
Nature na-akpa nkata imepụta ihe na-akwụsị obi na ịdị ebube ya. Carats 1,686.3 caraka LKA na carats 1,438 bụ Stephenson emeralds nke achọpụtara na 1984 na 1969.
Na-asọpụrụ n'ime mpaghara Hiddenite bụ otu n'ime nkume kachasị mma n'ụwa, mana ndị gemologists mara mma na-asọpụrụ nnukwu okwute abụọ a, nkume okike nke kristal dị ịtụnanya n'etiti emeralds kachasị dị na ụwa: LKA na Stephenson.
Mim Emerald: cara 1,390
A nnukwu, di-hexagonal prismatic kristal nke 1,390 carats uncut na a mara mma miri emi green agba. Ọ bụ uzo na atụmatụ ole na ole dị na elu 2/3, ma bụrụ translucent na mpaghara ala. Lọ na Museum Mim, Beirut, Lebanon.
Duke nke Devonshire Emerald: 1,383.93 carats
Duke nke Devonshire Emerald bụ otu n’ime nnukwu akụ bara nnukwu uru na ụwa, na-atụle 1,383.93 carats. Na-amalite na ebe a na-egwupụta akụ na Muzo, Colombia, ọ bụ nke Emperor Pedro I nke Brazil nwere ma ọ bụ resị ya nye William Cavendish, Duke nke 6 nke Devonshire na 1831. E gosipụtara ya na Nnukwu Ngosi Ngagharị na London na 1851, na nso nso a na Natural Ihe ngosi ihe mgbe ochie n’afọ 2007
The Isabella Emerald, nke a na-egbutu carats 964, bu nke Archeological Discovery Ventures, LLC.
Isabella Emerald nwetara aha ya n'aka Queen Isabella nke Portugal, eze nwanyị nke Eze Charles V (1516 ruo 1556), Emperor dị nsọ nke Rome, Eze Spain, na Archduke nke Austria, ndị ketara alaeze buru ibu gbasaa na Europe, si Spain. na Netherlands ruo Austria na alaeze nke Naples, na ókèala ofesi nke Spanish America.
Queen Isabella chọsiri ike inweta kristal ahụ ma chọọ inweta ya, mgbe ọ nụsịrị akụkọ ndị na-egbuke egbuke banyere nkume si n'aka Hernan Cortez, n'akwụkwọ ozi edere na Mexico. Nkume a maara dị ka ihe omimi ”Emerald nke Ikpe” nyere Cortez, nke Montezuma nke Abụọ, Eze nke Alaeze Aztec, n'oge Cortez batara na obodo Tenochtitlan ya na ndị agha ya na November 8, 1519. Hernan Cortez kpọrọ nkume ahụ. na nsọpụrụ nke Queen Isabella, nwunye eze nke Charles V, Holy Rome na Eze Spain.
A chọtara Gachalá Emerald, otu n’ime emerald nke kachasị baa uru n’ụwa niile n’afọ 1967, n’ime ebe a na-egwupụta ihe akpọrọ Vega de San Juan, nke dị na Gachala, obodo dị na Colombia, nke dị otu narị na iri anọ na abụọ site na Bogota. Gachalá Chibcha pụtara "ebe Gacha." N'oge a, kristal ahụ dị na United States, ebe e nyere ya ụlọ ọrụ Smithsonian nke New York City jeweler, Harry Winston.
Patricia Emerald: carat 632
Patricia bụ nnukwu ihe atụ mara mma. Na 632 carats, dihexagonal, ma ọ bụ akụkụ iri na abụọ, a na-ahụta kristal dị ka otu n'ime emeralds n'ụwa. N’ịbụ nke a hụrụ na Colombia n’afọ 1920, aha ya bụ nwa nwaanyị onye nwe ebe ahụ.
Ihe ọghọm dị na kristal a bụ ihe dị mma mana ọ na-emebi ogologo oge siri ike. Ihe atụ a bụ obere emeralds ole na ole echekwara nke ọma. Taa, Colombia ka bụ isi iyi emeralds n'ụwa.
The Mogul Mughal Emerald: carat 217.80
Mogul Mughal Emerald bụ otu n'ime emeralds kasị ukwuu mara. Mkpokọta ụlọ Christie kọwara ya dị ka:
Emerald ahụ nke nwere akụkụ anọ, nke akpọrọ Mogul Mughal, nke dị otu narị 217.80 carats, nke a tụrụ atụ na arịrịọ Shi'a n'edemede naskh mara mma, nke edepụtara na 1107 AH, agbara mma a na-ese ebe niile, akwa rosette nke otu ifuru poppy buru ibu, nwere ahịrị atọ nke obere poppy poppy n'akụkụ abụọ, akụkụ beveled a pịrị apị nke obe ụkpụrụ mbepụ na herringbone mma, onye ọ bụla nke anọ n'akụkụ gbapuru maka Mgbakwụnye, 5.2 * 4.0 * 4.0 cm.
Ebu ụzọ bibie ya na Colombia, e rere ya na India, ebe ndị ọchịchị nke Alaeze Mughal chọrọ ka nkume ahụ chọọ. Mogul Mughal pụrụ iche na kristal Mughal na-ebu ụbọchị - 1107 AH (1695-1696 AD) - nke dị n'ime ọchịchị Aurangzeb, eze nke isii. Agbanyeghị, ndị ọchịchị Mughal bụ Sunni, ebe e dere ya, a heterodox Salawat raara nye Hassan ibn Ali na Husayn bin Ali nke a makwaara dị ka Nad e Ali, bụ Shi'a, na-eme ka ọ bụrụ na ọ bụghị nke Aurangzeb, kama ọ bụ otu n'ime ndị odibo ya ma ọ bụ ndị ọrụ ya.
E rere ya na 27 Septemba 2001 site na Christie maka £ 1,543,750, gụnyere ego onye na-azụ ya. Site na 17 Disemba 2008, ọ nọ na Museum of Islamic Art, Doha, Qatar.
Emerald ama ọwọrọiso
Eze Carolina: 64 carats
Onye eze obodo ahụ nke 64.82 carat na-etinye ugwu ugwu NC na map! E kwuru na a ma ama North Carolina Emerald sitere n'ike mmụọ nsọ yiri nke Catherine the Great nwere.
Nwanyị eze nwanyị ahụ nwere ọmarịcha hexagonal nke emebere Colombia emerald na diamonds gbara emerald ahụ na brooch nke rere na Christie maka ihe karịrị $ 1.65 nde. A zụrụ Carolina Emperor, nke a hụrụ na mpaghara na Hiddenite, NC, n'afọ gara aga ma ugbu a ka enyere onyinye na North Carolina Museum of Natural Sciences na Raleigh, NC.
Ihe kachasị nke a bụ na onye na-eme ihe rịọrọ ka a ghara ịkpọ aha ya. E kwuru na ihe ngosi ahụ na kristal atọ a na-egbutu. Nkume buru ibu nke na-atụle 1,225 carats bụ agba odo na-acha anụnụ anụnụ nke a ga-atụnyere na nkume Muzo.
Emerald nke Saint Louis: carats 51.60
Emerald ahụ bụ Saint-Louis nke chọrọ okpueze nke Ndị Eze France si na mines nke Austria na ọtụtụ emeralds ndị ochie. Ngwuputa ndị a rụpụtara ruo narị afọ nke 19, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nchọpụta Ural na-etinye na 1830.
Chalk Emerald: carats 37.82
Ndị ọchịchị alaeze nke Baroda State, bụ obodo ndị isi na India, nwere nkume ahụ. Ọ bụ ihe etiti nke emerald na diamond diamond nke Maharani Saheba yi, onye nyefere ya nwa ya nwoke, Maharajah Cooch Behar.
Na narị afọ nke 20, a na-eweghachi ihe ndị ahụ site na nke mbụ ya nke 38.40 carats (7.680 g) ma tinye ya na mgbanaka nke Harry Winston, Inc. mere, ebe ya na diamonds iri isii yiri pear, na-agụta mkpokọta 15 carats.
Onye mgbanaka ahụ nyere Mr. na Oriakụ O. Roy Chalk na Smithsonian Natural History Museum na 1972 ma bụrụkwa akụkụ nke onye SmithsonianNchịkọta Mba na Nchịkwa.
Emeralds akpọghị aha
Otu karat 7,052 a na-egbutu kristal si Colombia, nke ndị nwe ya ma were ya dị oke ọnụ ahịa.
Otu karat 1,965 a na-egbughi nkume Russia, nke egosiri na Natural History Museum nke Los Angeles County.
Otu carats 1,861.90-ct na-egbughi na nkume a na-akpọghị aha site na Hiddenite, NC, nwere nkeonwe. Achọpụtara na 2003, nke a bụ ugbu a bụ emerald kasị mara amara na North America.
Nkume kristal ise a na-akpọghị aha si Muzo, Colombia, ndị e debere n’ebe a na-echekwa akụ nke Bank of Republic of Colombia, dị narị carat abụọ na iri abụọ ruo otu narị na iri asaa na isii.
Fred Leighton rere iberibe 430 a pịrị apị Nkume ọtụtụ nde dollar.
ọ al-Sabah Collection si Kuwait nwere ọtụtụ nkume mara mma, gụnyere 398 carats kristal na ụdị hexagonal na 235 carats kristal bead.
Akara kristal, ọla edo na enamel nke 17th narị afọ nke Mughal mmanya iko 7 cm rere na Christie maka £ 1.79 nde na 2003.
Nkume Mughal nke 161.20 puru api weghaara $ 1.09 nde na Christie na 1999.
Emerald nke kachasi elu nke uwa
A na-agba nkume nkume dị kilogram 11.5 dị ka emerald kasị ukwuu n'ụwa ma kpọọ ya Teodora, aha na-enweta site na Grik wee bụrụ "onyinye sitere n'aka chi."
Nkume ahụ, agbanyeghị, ọ nwere ike ọ gaghị abụrịrị $ 1-nde-gbakwunyere na nkume onye akpọrọ aha ya bụ Regan Reaney kwalitere ya.
E jidere Maazị Reaney na Jenụwarị 2012 na Kelowna na ime BC, dịka ndị uwe ojii Royal Canadian Mounted jidere ya. E boro Maazị Reaney ebubo ọtụtụ mpụ aghụghọ na Ontario, RCMP kwuru na nkwupụta dị mkpirikpi, ndị uwe ojii Hamilton nwere ikike pụrụ iche maka njide ya.
Ndị uwe ojii Kelowna amabeghị Maazị Reaney na mbụ, mana ọ naghị eche na mmuo ahụ ịdị na-adị obere. O nwere mkpuru ahia di oke ahia nke mmiri na-ere, ka emechara.
N'ezie, ọ bụ ezigbo beryl, mana agba ya.
Emerald kasị ukwuu n'ụwa: Ajụjụ
Ego ole bụ emerald kacha baa uru n'ụwa?
Ekpuchiela nnukwu akụ n'ụwa ka ekpughere n'otu shard, Bahia Emerald dị ihe dịka 1.7 nde carat, ma ọ bụ 752 lbs. Achọpụtara ya na mpaghara Bahia nke ọwụwa anyanwụ Brazil. Nnukwu okwute ahụ, nke nọ ugbu a na ọdụdụ na Los Angeles, nwere ike ịbụ ihe ruru nde $ 925.
Nye nwere emerald kasị ukwuu n'ụwa?
Achọpụtala kristal kachasị n'ụwa, nke ịdị arọ ya dị 1.1 Kg ma ọnụ ahịa ya ruru nde £ 2m n'otu ebe a na-egwupụta ihe na Zambia. A chọtara ụlọ carats 5,655 site na ụlọ ọrụ Gemfields na Ngwuputa na Kagem, nnukwu emerald nke ụwa, na October 2, 2020.
Ọzọ ozi gemological na emerald maka ire ere na ụlọ ahịa anyị
Nke a na ntinye e gwa ke News na tagged nnukwu emerald, nnukwu emerald na ụwa, nnukwu emerald, emerald kasị ukwuu n'ụwa, ụwa nnukwu emerald.